ဖခငျကွီးနဲ့အမှတျတရ ပုံလေးတှတေငျကာ ဒီနကေ့ရြောကျတဲ့ အဖမြေားနကေို့ ဂုဏျပွုစကား ဆိုလိုကျတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ – CHAR TAKE
ဖခငျကွီးနဲ့အမှတျတရ ပုံလေးတှတေငျကာ ဒီနကေ့ရြောကျတဲ့ အဖမြေားနကေို့ ဂုဏျပွုစကား ဆိုလိုကျတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ
16/03/2022char take0 Comments
ပရိသတျကွီးရေ အမွဲရိုးရိုး ယဉျယဉျလေးနဲ့ အနအေထိုငျ သိမျမှကေ့ာ အမွဲလိုလို ကွိုးစားနတေဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ စိုးပွညျ့ကတော့ ဘယျအခြိနျဖွဈဖွဈ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို သိမျးပိုကျနိုငျ သူကွီးပါပဲနျော ။ အနုပညာ မြိုးရိုးကွီးထဲက မငျးသမီးတဈလကျဖွဈပွီး ငယျစဉျ အရှယျဆယျကြျောသကျ ထဲက အနုပညာ လောကထဲ ဝငျရောကျခဲ့သူပါ။
ဆယျကြျောသကျနဲ့ ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျမှာ အကယျဒမီရရှိခဲ့တဲ့ မငျးသမီးလေး တဈလကျပါ ။ ဒါ့အပွငျ မိဘတှေ အပျေါမှာလညျး အ မွဲရိုသေ လေးစားကာ လိမ်မာရေးခွားရှိတဲ့ တဈဦးတညျးသော သမီးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာလညျး ” တပေါငျးလပွညျ့နေ့…အဖမြေားနေ့….ခဈြတဲ့ ဖဖေသေကျရှညျကနျြးမာစိတျခမျြးသာပါစေ…. ဖဖေလေိုခငျြတဲ့..တရားထူး တရားမွတျ မြားကိုလညျး ရရှိပါစေ…❤️❤️” ဆိုတဲ့ စာလေးတငျကာ အဖမြေားနကေို့ ဂုဏျပွုစကား ဆိုခဲ့ တာပါ ။ ပရိသတျတှလေညျး အဖမြေားနမှေ့ာ ဖခငျနဲ့အတူတူ ပြျောရှငျစရာတှေ ဖနျတီးနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေး လိုကျပါတယျ ။ crd
Zawgyi … ဖခင်ကြီးနဲ့အမှတ်တရ ပုံလေးတွေတင်ကာ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ အဖေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုစကား ဆိုလိုက်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
ပရိသတ်ကြီးရေ အမြဲရိုးရိုး ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ အနေအထိုင် သိမ်မွေ့ကာ အမြဲလိုလို ကြိုးစားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုးပြည့်ကတော့ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်နိုင် သူကြီးပါပဲနော် ။ အနုပညာ မျိုးရိုးကြီးထဲက မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ် အရွယ်ဆယ်ကျော်သက် ထဲက အနုပညာ လောကထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သူပါ။
ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ အကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်လက်ပါ ။ ဒါ့အပြင် မိဘတွေ အပေါ်မှာလည်း အ မြဲရိုသေ လေးစားကာ လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း ” တပေါင်းလပြည့်နေ့…အဖေများနေ့….ချစ်တဲ့ ဖေဖေသက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပါစေ…. ဖေဖေလိုချင်တဲ့..တရားထူး တရားမြတ် များကိုလည်း ရရှိပါစေ…❤️❤️” ဆိုတဲ့ စာလေးတင်ကာ အဖေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုစကား ဆိုခဲ့ တာပါ ။ ပရိသတ်တွေလည်း အဖေများနေ့​မှာ ဖခင်နဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး လိုက်ပါတယ် ။ crd